WaterProof Live GPS Tracker
problemclean 13 Jan 2020
problemclean ·3Views
problemclean ·2Views
Waterproof Kids GPS Watch
problemclean ·5Views
A6 Waterproof Smart Bracelet.mp4
problemclean · 160 Views
4K Sports Camera - 16MP - Waterproof (30M)
problemclean · 67 Views
Car Tracker TK905 GSM GPS 5000mAh Li battery
problemclean · 19 Views
Magnetic Long Life WaterProof GPS Tracker.mp4
problemclean · 14 Views
GPS One C1 Tracker.mp4
problemclean · 74 Views
GPS GF-07 Tracker
problemclean · 223 Views
Mobile Live Smart Camera
problemclean · 77 Views
Real Time Two way Working GPS tracker.mp4
problemclean · 497 Views
Waterproof Touchscreen Kids GPS Camera Watch (FlashLight include)
problemclean · 456 Views
problemclean ·9Views
WiFi Cloud IP Pen Camera RL107_ local remote live streaming
problemclean · 16 Views
Reference - EE000053
ယခုဈေး - 65,000 ks
ယခင်ဈေး - 85,000 ks
Other discount -
ရေလုံပြီး အရမ်း hotဲဖြစ်တဲ့ Live GPS ကောင်းကောင်းတစ်ခုကို ရှာနေပါသလား ?
Live GPS လေးက ခေတ်ကာလနဲ့အညီအရမ်းအသုံးဝင်ပါတယ် ။ အိမ်ပြန်နောက်ကျတတ်တဲ့ သားသမီးတွေအတွက်ဖြစ်ဖြစ် ၊ ချစ်သူအတွက်ဖြစ်ဖြစ် ညဘက်အပြင်ထွက်တတ်တဲ့ သူတွေအတွက်အဖြစ် အရမ်းအသုံးဝင်ဒါအမှန်ပါဘဲ ....
အရွယ်အစားအနေနဲ့ ဒင်္ဂါးဆိုက်သာ ရှိပြီး သယ်သွားရလွယ်ကူတဲ့အပြင် ကားထဲမှာထည့်လိုက်မလား ? ကလေးတွေမှာ စိတ်မချလို့ ထည့်ပေးခြင်လား ? ကိုယ်ချစ်တဲ့ခွေးလေးတွေမှာထည့်ပေးခြင်လား .. ဒါမှမဟုတ်အသက်ကြီးတဲ့ လူကြီးတွေမှာထည့်ထားပေးခြင်လား ? ဘယ်နေရာမှာသုံးသုံး ကြာရှည်လဲခံတဲ့ Live GPS အမျိုးအစားလေးပါ ။အရေးပေါ်အနေနဲ့ SOS button ပါဝင်ပြီး လွယ်လင့်တကူနိပ်လိုက်တာနဲ့ အရေးပေါ်ထည့်ထားတဲ့ နံပါတ် (၂) ခုကို တစ်ခုမရရင် တစ်ခု , မရမခြင်းခေါ်ပေးပါလိမ့်မယ် ။ဒါကြောင့် အကြောင်းကြောင်းကြောင့် အန္တာရာယ် ဖြစ်ခဲ့ရင်တောင် ဖုန်းနံပါတ်များစွာကို ခက်ခဲစွာ နိပ်ခေါ်စရာမလိုဘဲ တချက်နိပ်တာနဲ့ အရေးပေါ် အကြောင်းကြားပေးနိုင်ပါတယ် ။Map အနေနဲ့ Google map ကို အသုံပြုထားပြီး သွားနေတဲ့လမ်းကြောင်းကို Live ကြည့်လို့ရအောင် ရွေလျားပြီးပြပေးဒါကြောင့် အရင် gps တွေလို ခလုပ်နိပ် sms ပို့နေစရမလိုဘဲ မြေပုံပေါ်မှာထင်းပြီမြင်နိုင်ပါတယ် ။ Google map အနေနဲ့ ဂြိုလ်တု ဓါတ်ပုံ ပုံစံကြည့်မလား ကားလမ်းကြောင်ပုံစံ လမ်းနာမည် ပါတဲ့ မြေပုံ အနေနဲ့ ကြည့်မလား ပြောင်းလဲကြည့်နိုင်ပါတယ် ။
Working Mode အနေနဲ့ Tracking ကို 1minutes အမြန်ပြောင်းလဲပုံ ထားမလား 10 minutes ပြောင်းလဲပုံထားမလား 1hours ပြောင်းလဲပုံထားမလား အဆင်ပြေအောင် ကိုယ်စိတ်ကြိုက် ချိန်လို့ရပါတယ် ။Application အနေနဲ့လဲ Admin (ပိုင်ရှင်) နံပါတ်သီးသန့်သတ်မှတ်ထားလို့ရသလို သတ်မှတ်ထားပြီးရင်လဲ အပြင်ဖုန်း တွေခေါ်ခွင်ကို WhiteList နဲ့ ထိန်းချုပ်နိုင်ပါသေးတယ် ။
ဒါကြောင့် နံပါတ်သိရင်တောင် အပြင်လူအနေနဲ့ waterproof live gps ကိုဖုန်းခေါ်ဆိုလို့မရနိုင်ဘဲ whiteList ထဲ ထည့်မှာဒါ ရရှိနိုင်ပါတယ် ။
Voice Monitoring အနေနဲ့ ကိုယ် ထည့်ပေးလိုက်တဲ့ ကား ၊ ကလေး ၊ နေရာကအသံကို မသိအောင် ကြားခြင်ဆိုရင်လဲ call back ပြန်ခေါ်ခိုင်းလို့ရပြီး တဖက်က အသံကိုကြားနိုင်တဲ့အပြင် ဒီဘက်ကအသံကတော့ တဖက်က မသိနိုင်အောင်လဲ အသုံပြုနိုင်ပါတယ် ။ ဒါကြောင့် Voice Monitoring သုံးမယ်ဆိုရင်တော့ တဖက် က ကိုယ်နားထောင်နေဒါကိုတောင်မသိနိုင်ပါ။
ကလေးတစ်ယောက်မှာထည့်ပေးဒါဖြစ်ဖြစ် အသုံပြုနေစဉ်အတွင်း ဖုန်းခေါ်ဆိုလို့ရပြီး ဟိုဘက်ဒီဘက်စကားပြောလို့ရသလို ခဏတာ မသုံခြင်တော့ရင် Do not disturb function လဲပါဝင်ပါသေးတယ် ။ရေထဲကျသွားရင် တောင် အလုပ်လုပ်နိုင်တဲ့အပြင် ရေလုံအောင် ရေလုံ ၀ိုက်စီးတွေ ထည့်ထားပေးတဲ့အပြင် လွယ်လင့်တကူ sim ကို ဖြုတ်တပ် လိုမရအောင် စကူနဲ့ ပိတ်ထားလို့ရအောင်လဲ ပြုလုပ်ထားဒါကြောင့် အရမ်းအဆင်ပြေဒါအမှန်ပါဘဲ ။
အသုံပြုချိန် အနည်းဆုံး ၂ - ၃ ရက် ကျော် အသုံပြုနိုင်ပြီး stand by အနေနဲ့ ၁၀ရက် ကျော်သက်မှတ်ထားပေးဒါကြောင့် ဓါတ်ခဲကုန်သွားဒါကိုလဲစိတ်ပူစရာမလိုပါဘူး ။ကြာရှည်အသုံးပြုနိုင်ဒါတော့အမှန်ပါဘဲ ....Geofence အနေနဲ့ ကလေးကို ထည့်ပေးထားတဲ့အချိန် ကလေးကျောင်းပြင်ထွက်ရင် Alam ပေးတဲ့ system ဖြစ်အောင် Area သတ်မှတ်ထားလို့ရပါတယ် (ကားထဲမှာ ထားမယ်ဆိုရင်လဲ ရန်ကုန်မကျော်ခြင်ဘူးဆိုပါဆို့ ) မကျော်အောင် ရန်ကုန် Area သတ်မှတ်ထားဒါနဲ့ အပြင်ထွက်ခဲ့ရင် Alarm ချက်ခြင်းပေးဒါကြောင့်သိနိုင်ပါတယ် ။Alarm အနေနဲ့လဲ Sound နဲ့ပေးမလား Vibration အနေနဲ့ပေးမလား အဖွင့်အပိတ်ပါဝင်ပါသေးတယ် ။
စမှတ် ( Admin phone ပိုင်ရှင်) နဲ့ water Proof Live GPS တည်နေရာကို အကွာအဝေးအတိအကျပြပေးနိုင်ပြီး Battery ဘယ်လောက်ကျန်တယ်အစ မြေပုံပေါ်မှာဖော်ပြပေးပါတယ်။မြေပုံပေါ်မှာ Live GPS ဖော်ပြပုံကို သွားနန်း speed , date , time အတိအကျ ပြပေးဒါကြောင့်လွယ်လင့်တကူ မမှားဘဲသိနိုငပါတယ် ။
Water Proof Live GPS မှ ပေးပို့တဲ့ message အကုန် Log file အနေနဲ့ ကြည့်နိုင်ပြီ3းmonth စာ အတွက် history ကိုလဲ built-in သိမ်းထားပေးတဲ့အတွက်အရမ်းအဆင်ပြေပါတယ် ။ ဘယ်သွားခဲ့တယ်ဆိုဒါကို အချိန်မရွေးပြန်လည်ကြည့်ရူ့ နိုင်ပါတယ် ။ကြည့်ရူ့နေတဲ့ မြေပုံကို အမြဲတမ်း 15 second မှာ Offiline ရောက်သွားခဲ့ရင်တောင် အမှားအရွင်းမရှိအောင် အမြဲ update လုပ်ပေးနေပါတယ် ။ထည့်ထားတဲ့ sim အနေဲ့ လှိုင်းမမိတဲ့ နေရာေ၇ာက်သွားခဲ့ရင် tracking လမ်းကြောင်းပြန်ကြည့်ပြီး သိနိုင်ပါသေးတယ် ။ဒါကြောင့် အရမ်းအဆင်ပြေပြီး အသုံးပြုရလဲလွယ် တကယ်အသုံးဝင်တဲ့ WaterProof GPS လေးကို ဆောင်ထားဖို့ မမေ့ကြနဲ့နော် ။